February 2016 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Posted by Lwin Pyin on Wednesday, February 3, 2016
အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို ပြောကြတဲ့အခါ သေသေချာချာ တိတိကျကျ အပိုင်ပုံဖမ်းပြီး ပြောတာမျိုး မဟုတ်ပဲနဲ့ .. ကျနော်တို့ သိသ၍ ၊ သိသလောက် ကတော့ ဒီလိုပါ..လို့ စကားအခံနဲ့ ပြောလိုတဲ့အခါ ဒီပုံစံလေးကို သုံးနိုင်ပါတယ်
As far as…= သလောက်တော့
ပုံစံ >> As far as + Sub + Verb
ရွှေဝါရောင် ဖုံး ။
၁၉၈၀ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်း ကာလရဲ့ မြန်မာပြည် ဂီတလောကမှာ ဂီတကြယ်ပွင့်တချို့ ပေါ်ထွက်လို့ လာခဲ့လေရဲ့။ အဲဒီလို ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ ဂီတကြယ်ပွင့်တွေထဲမှာ တဦးအပါအဝင် ဖြစ်တဲ့သူကတော့ ၈၈ အရေးတော်ပုံ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုနဲ့ အတူ လူသိများခဲ့တဲ့ တေးရေး၊ တေးဆို ကိုမွန်းအောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ (ကိုမွန်းအောင်) ကို ဘာ့ကြောင့် ဂီတ ကြယ်ပွင့်တပွင့်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြသလဲ။ ကိုမွန်းအောင်ဟာ စတီရီယိုခေတ်ဦးနဲ့ ခေတ်လယ်ကြားကာလမှာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တဦး ဖြစ်ပြီး ကွဲပြားတဲ့ Vocal Color နဲ့ ရိုးရှင်း လှပတဲ့ သီချင်းပုံစံတွေကို ဖန်တီးသီဆိုခဲ့သူ တဦး ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို သေချာရဲ့လားလို့ မေးချင်တဲ့အခါ ဒီလိုလေးမေးလိုက်ပါ ၊ ၀ါကျကို လိုချင်တဲ့ အကြောင်းအရာရောက်အောင် ချိတ်ဆက်ပုံဖေါ်သွားတဲ့ ချိတ်ကလေးတွေကို သေချာမှတ်ပါ ၊ ၀ါကျတွေပွားယူပါ ။ တစ်ခါဖတ်တိုင်း ကြိုက်တဲ့ ၀ါကျလေးတွေထဲကနေ တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်း လောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အပိုင်ရသွားအောင် လုပ်ပါ ။
တရားသူကြီးက အမှုကို မစစ်ဆေးခင် ပြောသတဲ့... ...
'ကျုပ်ကို တရားလိုက ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ပေးတယ်၊
တရားခံကလည်း ဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀ ပေးတယ်၊
အဓိကကတော့ သူတို့ကို ဘက်လိုက်ပြီး အနိုင်ပေးအောင်လို့တဲ့၊
မြန်မာ့အသံ နဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားက အနှစ် (၇၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အငြိမ့်ခန်းလာနေတဲ့အခါ အားကြိုးမာန်တက် ကပြဖျော်ဖြေနေတဲ့ မြန်မာ့အသံဝန်ထမ်းတွေကို နှစ်ခြိုက်သဘောကျ အားပေးနေလျက်ကပဲ စိတ်ထဲမှာ ဝမ်းပန်းတနည်း ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ ခံစားလာမိပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် လို့ ပြောရမလားမသိဘူး။ နေ့လည်က နိုဗိုတယ်ဟော်တယ်က အပြန် အသစ်အသစ် ဖြစ်တည်လာတဲ့ ထည်ထည်ခန့်ခန့် အဆောက်အဦကြီးများရဲ့ အကြားမှာ မနည်းမြင်အောင် ကြည့်ယူရတဲ့ မြန်မာ့အသံပေါ်တီကိုကြီးကို လိုက်ရှာရင်း ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ အဲသည်အဆောက်အဦကြီးဟာ ပြည်လမ်းပေါ်က ဖြတ်သွားတိုင်း လည်ပြန်ငေးလို့ ကြည့်ယူရတဲ့ ပိသုကာလက်ရာတစ်ခု လို့ ပြန်ပြောင်း သတိရမိပါတယ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးရှေ့က ဖြတ်သွားတိုင်း လက်အုပ်ကလေးချီမိသလိုပဲ မြန်မာ့အသံရှေ့က ဖြတ်သွာားတိုင်းလည်း အဲသည်ရေဒီယိုတစ်လုံးနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် အသံလွှင့်အဆောက်အဦကြီးကို ကြည့်ဖြစ်အောင် လှည့်ကြည့်ခဲ့တာပါပဲ။ နေ့တိုင်း အိမ်မှာနားထောင်နေရတဲ့ ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေဟာ အဲ့ဒါကြီး အထဲကလာတာမို့ ကိုယ်ကြားနေကျ အသံနဲ့လူတွေဟာ အဲ့ဒီအထဲမှာ နေကြလေတယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ သံယောဇဉ်တွယ်နေတာများ ဖြစ်မလားပဲ။
သတင်းမီဒီယာသမားသည် ကြားနေရမည်၊ ဘက်မလိုက်ရ၊ မျှတရမည်၊ တစ်ဖက်သတ်သတင်း မဟုတ်ရ ဆိုသည်မှာ သတင်းမီဒီယာသမားကောင်းတစ်ယောက်၏ ကျင့်ဝတ်ထဲတွင် ပါရှိပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျင့်ဝတ်သည် ဥပဒေမဟုတ်၊ အငြင်းပွားဖွယ်ရာများနှင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ ဥပဒေသည်ပင်လျှင် စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်လက်ထက် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်များသည် ဥပဒေဖျစ်ဖျစ်မည် မဟုတ်ဘဲ စစ်အစိုးရအကျိုးငှာ ပြဋ္ဌာန်းထားချက်များဖြစ်သည်။ ဥပဒေအရဆိုပြီး မှန်ကန်သူများ ခံစားလိုက်ရသည်များ ဒုနှင့်ဒေးရှိသည်။ ဥပဒေကိုယ်၌က အများပြည်သူအကျိုးအတွက် မဟုတ်ဘဲ လူတစ်စုအကျိုးစီးပွား (၀ါ) စစ်အာဏာရှင် အကျိုးစီးပွားအတွက် ပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့သည်များ မြန်မာတွင် အသင်္ချေအနန္တရှိနေသည်ကို တစ်ချက်လှည့် လေ့လာလိုက်ရုံနှင့် အလွယ်တကူ တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဥပဒေကိုယ်၌က ထိုမျှဆိုးရွား စုတ်ပဲ့နေသည်ဆိုလျှင် ကျင့်ဝတ်ကိစ္စသည် သေးမွှားသော အရေးအရာဖြစ်သည်။ သို့တိုင် ကျင့်ဝတ်သည် ပယ်အပ်သည့်အရာမျိုးကား မဟုတ်ပြန်ချေ။ ဆရာဝန်တွင် ဆရာဝန်ကျင့်ဝတ်ရှိသကဲ့သို့ ရှေ့နေ တွင် ရှေ့နေကျင့်ဝတ်ရှိသည်၊
ခုရက်ပိုင်း ဟောပြောပွဲခရီးစဉ်တွေမှာ အဓိက
အကြောင်းအရာကတော့ လူငယ်ထုအရေး ပါပဲ။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ တောင်ကုတ်မှ ကရင်ပြည်နယ်
မြ၀တီမြို့။ ထိုမှသည် ဧရာဝတီရဲ့ ပုသိမ်၊ ငသိုင်း
ချောင်း၊ အသုတ် စသဖြင့် ဟောပြောပွဲတိုင်းမှာ
၄ မိနစ်ကျော်ကျော်ပဲ အချိန်ကြာပေမယ့် စကားတွေအများကြီးပြောပြလိုက်သလို ခံစားရတဲ့ ဗီဒီယို
ကြည့်ပြီး မျက်ရည်ကျတယ်ဗျာ။ ၄ မိနစ်ကျော်ကျော်ပဲ အချိန်ကြာပေမယ့် စကားတွေအများကြီးပြောပြလိုက်သလို ခံစားရတယ်။
Posted by Aung Kyaw on Tuesday, October 20, 2015
အသစ်စက်စက် လက်ထပ်ပြီးစလင်မယားစုံတွဲတစ်တွဲ အိမ်အသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့
လာကြသည်။ အိမ်ပေါ်သို့ရောက်စမှာပင် မိန်မက ယောက်ျားကိုပြောသည်။
“ဟန်နီ . . ရှင်သိလား။ အိမ်ပေါ်ထပ်က ရေချိုးခန်း က ပိုက်တွေ ပျက်နေတယ်။
“ဘာလဲ . . . ငါ့ပုံက ပိုက်ပြင်သမားနဲ့တူနေလို့လား”
Author: lubo601 | 6:59 PM | No မှတ်ချက် |
ပင်နင်ဆူလာပလာဇာ မြေညီိထပ်ကနေ ဖူနန်ဖက်လှမ်းကြည့်လိုက်ရင် Nalan ဆိုတဲ့ သားသတ်လွတ် စားသောက်ဆိုင်ကို လှမ်းမြင်ရတယ်။
အဲဒီဆိုင်ရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်က အင်္ဂလိပ်စာကိုမြင်တိုင်း စိတ်ထဲ ဘဝင်မကျဖြစ်မိတယ်။
Purely Vegetarian ... တဲ့။
သင့်ကို သူချစ်လို့၊ သင့်ကို
လူထုဒေါ်အမာ ရာပြည့် I လေဘာတီမမြရင် l နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်.. နှင့် မြို့မ...
Posted by Lu Bo on Monday, February 22, 2016
အိပ်မပျော်သူများအတွက် ပန်ကာနှင့်အိပ်စက်ခြင်းက ညင်သာစွာ လှုပ်သိပ်စေသလိုဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများက လူတစ်ယောက်၏ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေသည်။
ဒီတစ်ခေါက် ကျနော်ခွင့်ပြန်ပြီး စင်္ကာပူကိုပြန်မယ်ဆိုတော့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းမိုးကြီးက စလုံးကို တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးလို့ သူလည်းလိုက်လည်မယ်တဲ့။
လူက တောသားလူလည်ဆိုတော့ ဘာမှမသိပေမယ့် သိဟန်ဆောင်တတ်တာက ခက်နေတာ။
မန္တလေးလေဆိပ်ထဲအဝင် လုံခြုံရေးစက်ဖြတ်တော့ ခါးပတ်ပါဖြုတ်ရတယ်။
ခါးပတ်ဖြုတ်ရတာက ကျန်တဲ့လူတွေက ပြသနာမရှိပေမယ့် သူကျတော့ ပြသနာတက်ရောဗျို့။
ပါရာစီတမောကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆရာဝန်များညွှန်ကြားမှုမရှိပဲ
တကယ်တော့ ပါရာစီတမောဟာ အဆိပ်တက်တတ်တဲ့ဆေးဝါးပါ။
အချို့ ပါရာစီတမောကို ကော်ဖီနဲ့အတူသောက်တတ်ကြပါတယ်။
ခင်ဇော် ဦး with Khin Zaw Oo.
မိန်းမတွေဟာလေ . . ငွေကိုစုဆောင်း ရတာကို
ဒါပေမဲ့လဲ . . အဖိုးတန် အ၀တ်အစားတွေကျတော့
၀ယ်လိုက်ကြပြန်ရော . .။
အဖိုးတန် အ၀တ်အစားတွေ ၀ယ်ပြီးပြန်တော့လဲ . .
၀တ်စရာ ဘာမှ မရှိဘူးလို့ ညဉ်းကြပြန်တယ် .. ။
English Speaking Basics (52) အင်္ဂလိပ်စကားပြောအခြေခံများ (၅၂)
‎Win Naing Oo‎
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့် ဖြစ်စေ ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားဖြင့် ဖြစ်စေ တစ်ခုခုအကူအညီပေးချင်တဲ့အခါ ဒီလိုပြောနိုင်ပါတယ်..
(1) I'll help you cook dinner tonight.
ဒီနေ့ည ကျနော်က ခင်ဗျား ညစာချက်ပြုတ်ရာမှာ ကူညီပါမယ်